DOWNLOAD ICECREAM SCREEN RECORDER 5.32 MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Onye na-ekpuchi ekpuchi ekpuchi 5.32
vcruntime140.dll bụ ọbá akwụkwọ na-abịa na Anya C ++ 2015 Redistributable Kit. Tupu anyị edepụta omume omume iji kpochapụ njehie ahụ metụtara ya, ka anyị hụ ihe kpatara ya. Ọ na-egosi na mgbe Windows enweghị ike ịchọta DLL na nchekwa usoro ya, ma ọ bụ faịlụ ahụ n'onwe ya nọ n'ebe ahụ, ma ọ bụghị n'ọnọdụ ọrụ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi mgbanwe ya site na mmemme nke atọ ma ọ bụ nchịkọta mbipụta.
Na omenala, a ga-enyefe faịlụ ndị ọzọ na usoro ihe omume ahụ, ma iji belata nha, ha na-esonye mgbe ụfọdụ na ngwa ntinye. Ya mere, ị ga-edozi nsogbu mgbe faịlụ ahụ na-efu na usoro. Ọ dịkwa mkpa ka ị hụ ma ọ bụ na njedebe nke usoro antivirus gị, ọ bụrụ n'ezie, na kọmputa gị.
E nwere nhọrọ dịgasị iche iche maka ịmalite, nke a ga-emeghachi nke mere na njehie a apụtaghị. N'ihe banyere vcruntime140.dll, i nwere ike iji Microsoft Visual C ++ 2015 Redistributable. Enwekwara nhọrọ nke iji usoro ihe omume ahụ, nke a na-eme ka ọ dịkwuo mkpa maka arụmọrụ nke arụmọrụ dị otú ahụ. Ma ọ bụ naanị mkpa ịchọta faịlụ vcruntime140.dll na saịtị ahụ nke na-enye ibudata DLL.
Nke a bụ onye ahịa nke nwere ebe nrụọrụ weebụ ya, yana enyemaka nke isi ya na-akwalite ụlọ akwụkwọ ọta.
Iji jiri ngwa a n'ihe banyere vcruntime140.dll, ịchọrọ:
Ịdebanye aha vcruntime140.dll na nchọta.
Họrọ faịlụ site na ịpị aha ya.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ DLL kpọmkwem, a ga-enyekwa nhọrọ a. Software a nwere ngbanwe ọnọdụ: jiri ya, ị ga-ahụ nsụgharị dị iche iche nke faịlụ ahụ ma ị nwere ike ịhọrọ nke ị chọrọ. Nke a nwere ike ịdị mkpa ma ọ bụrụ na ị rụnyere otu ọbá akwụkwọ, mana njehie ka dị. Ịkwesịrị ịnwale ụdị dị iche iche, ma eleghị anya, ọ dị mma maka ọnọdụ gị. Nke a bụ ihe achọrọ maka nke a:
Gbanwee ngwa ahụ n'ọnọdụ di elu.
Họrọ nhọrọ ọzọ vcruntime140.dll na pịa "Họrọ nsụgharị".
Ọzọ ị ga-ajụ:
Dee adreesị nwụnye nke vcruntime140.dll.
Mgbe pịa nke a "Wụnye Ugbu a".
Usoro 2: Microsoft Visual C ++ 2015
Microsoft Visual C ++ 2015 nwere ike ịgbakwunye components na Windows na-eme ka usoro nke software dị na Visual Studio. Iji dozie njehie na vcruntime140.dll, ọ ga-adị mma ibudata ngwugwu a. Usoro ihe omume ahụ ga-agbakwunye ụlọ akwụkwọ ndị na-adịghị efu ma debanye aha ndebanye aha. Ọ dịghị ihe ọzọ a chọrọ ime.
Download Microsoft Anya C ++ 2015
Na ibe ebudata ị ga - achọ:
Họrọ asụsụ Windows.
Enwere nhọrọ nhọrọ abụọ dị iche iche - maka usoro nwere profaịlụ 32 na 64-bit. Ọ bụrụ na ị maghị ikikere nke usoro gị, mepee ya "Njirimara" site na ndepụta nke akara ngosi "Kọmputa" na desktọọpụ. A ga-egosipụta ikike digit na windo ozi nke usoro gị.
Maka usoro 32-bit, ị ga-achọ x86, na maka 64-bit, x64, karị.
Gbaa nhazi nke nkesa ebudatara.
Kwere nkwekọrịta ikikere.
Mgbe echichi ahụ zuru oke, vcruntime140.dll ga-etinye na usoro ahụ, a ga-edozi nsogbu ahụ.
N'ebe a, ọ dị mkpa ikwu na nsụgharị ndị a wepụtara mgbe 2015 nwere ike ghara ikwe ka ịwụnye ochie mbipute ahụ. Ị ga-ewepụ ha site "Ogwe njikwa" wee wụnye mbipute 2015.
Nchịkọta ọhụrụ anaghị abụ mgbe ọ bụla na-agbanwe maka nsụgharị ochie, ya mere i kwesịrị iji mbipute nke afọ 2015.
Usoro 3: Download vcruntime140.dll
Iji wụnye vcruntime140.dll na-enweghị ngwa atọ ọzọ, ịkwesịrị ibudata ya ma tinye ya na ndekọ ahụ na:
na-edegharị ya n'ebe ahụ n'ụzọ dị mfe maka gị ma ọ bụ na-akpụgharị ya dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ:
Adreesị nke iṅomi faịlụ DLL agbanwee n'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị na ịwụnye ngwugwu Visual C ++ Redistributable. Dịka ọmụmaatụ, Windows 7 ma ọ bụ Windows 10 nwere ntakịrị ogo nke 64 bits ga-enwe adreesị nrụnye dịgasị iche karịa otu Windows ahụ na nkwụsị x86 bit. Maka ama ndi ozo banyere uzo na ebe aga etinye DLL, dabere na sistemụ arụmọrụ, ị nwere ike ịmụta site n'isiokwu a. Iji debanye aha ọbá akwụkwọ ahụ n'akwụkwọ, zoo aka na isiokwu anyị ọzọ. A choro usoro a na ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, a na-achọkarị ya.